मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि प्रहरीमा कार्यरत मिलन थापाको नि*धन – Online Nepal
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि प्रहरीमा कार्यरत मिलन थापाको नि*धन
April 29, 2020 448
आज मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि एक जनाको निधन भएको छ । काठमाण्डौ देखि नुवाकोट जाँदै गरेको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा उक्त मोटरसाइकलमा सवार दुइ मध्य एक जना पुरुषको निधन भएको छ भने महिला घाइते भएकी छन् । काठमाण्डौ देखि नुवाकोट आफ्नो ससुराली जान लागेको र बीच बाटोमा दुर्घटना हुँदा भेनाजुको निधन र साली घाइते भएको खुलेको छ ।
दैलेख नौमुले गाउँपालिका चौराठा मलु दह निवासी मिलन थापाको घटनास्थलमै निधन भएको हो । बाटोमा जाँदा मोटरसाइकल दुर्घटना भै आफु तल खसेको तर पछाडी बसेकी साली रुखमा अड्किएर बच्न सफल भएकी छन् । दुर्घटना पछि सालीले नै आफन्तलाई खबर गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । घाइते भएकी युवतीको अहिले अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने थापा प्रहरीमा कार्यकर्त थिए । आफन्तका अनुसार थापा ३ बर्ष देखि प्रहरीमा कार्यरत रहेको आफन्तले जनाएका छन् । दुर्घटना कसरि भयो भन्ने बारे थाहा हुन् सकेको छैन तर घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छ । लकडाउनको बेला उनि कसरि काठमाण्डौ देखि नुवाकोट जाँदै थिए भन्ने कुरा थाहा हुन् सकेको छैन । लकडाउनको बेला अतिआवस्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन सरकारले सूचना नै जारि गरेको छ तर पनि यस्ता घटना घटीनै रहेका छन् ।
केहि दिन अघि मात्र बाँके जिल्लाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा कर्तव्यमा खटिएका एक प्रहरी जवानको मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएको थियो । क्वारेन्टाइनको ड्युटी सकेर उनी मोटरसाइकलमा निवास फर्कने क्रममा सो दुर्घटना भएको थियो । ड्युटी सकेर भे ३ प ३९ नं को मोटरसाइकलमा निवास फर्कनेक्रममा प्रहरी जवान सुवास सार्कीको राँझाचोक नजीकै सडकको डिभाइडरमा ठोक्किएर निधन भएको हो ।
Prevलकडाउनको बिषयलाइ लिएर काठमाण्डौ महानगरपालिकाजारि गर्यो यस्तो आग्रह !
Nextउदयपुरबाट काठमाडौं आएका ४९ बर्षीय पुरुषमा आरडीटी पोजेटिभ देखियो
भर्खरै चीनले दियो नेपाललाई एक्कासी निक्कै ठूलो खुशीको खबर ! असली छिमेकी भनेको चिन पो हो (भिडियो हेर्नुहोस्)
गर्भवती भएको ३ महिनामा गरिने यस्ता गल्तीले हुनसक्छ बच्चा तेस्रोलिङ्गी (भिडियो)
सावधान! बिहिबारको दिन भुलेर पनि यी काम नगर्नुहोस्, नत्र जिन्दगिभर पछुताउनु पर्ला
कालापानी, लिपुलेखबारे भबि*स्यबा*णी मिलेपछि अब यस्तो ख*तरा हुने ठोकुवा गरे नेपालकै कान्छा ज्योतिषले (हेर्नुहोस भिडियो)
वैशाख ३ गतेपछि यस्तो छ आवतजावतको तयारी , ३ गते सम्म धैर्य गरौ (41279)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37983)